Jahwareer badan oo ka taagan heybta maleeshiyadii leysay Saraakiisha | Dhacdo
Home Wararka Maanta Jahwareer badan oo ka taagan heybta maleeshiyadii leysay Saraakiisha
Jahwareer badan oo ka taagan heybta maleeshiyadii leysay Saraakiisha
Ka dib weerarkii maalintii Arbacada ka dhacay Gobolka Galgaduud, laguna dilay Saraakiil ka tirsaneyd Taliska Qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ayaa waxa uu jahwareer ka taaganyahay heybta maleeshiyadii ka dambeysay weerarkaasi.
Weerarkan oo ka dhacay wadada xiriiriso Degmooyinka Guriceel iyo Balanballe ayaa lagu dilay shan ka mida Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka.
Illaa iyo hadda waxaa la’ogyahay in weerarkaasi ay gaysteen maleeshiyaad qaab beeleed u abaabulan, balse aan si dhaba loo garanayn heybtooda.
Mar sii horeysay waxaa soo baxay warar sheegaya in maleeshiyadaasi ay ka soo jeeddo Degmada Guriceel, gelinkii dambe ee Jimcihiina waxaa soo baxay warar kale oo aan la xaqiijin, isla-markaana sheegaya in maleeshiyadu ka soo jeeddo Balanballe.
Warar kalana waxay sheegayaan in maleeshiyadaasi laga soo abaabulay deegaano ka tirsan Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya, balse xuduud la leh Gobolka Galgaduud.
Wasiirka Warfaafinta Galmudug, Axmed Shire Falagle oo Khamiistii la hadlay BBC waxa uu sheegay inaanay maleeshiyadaasi ahayn mid leh goob loogu hagaago.
Ciidanka Xoogga Dalka oo kaashanaya Kumaandooska Danab iyo Nabad Suggida Galmudug ayaa weli wada hawlgalka lagu baadigoobayo maleeshiyadaasi, si sharciga loo horkeeno.
Ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay illaa shan nin oo weerarkaasi lala xiriirinayo, kuwaa oo deegaano kala duwan ka soo kala jeeda, waana midda sii adkeysay in durbaba la aqoonsado heybta iyo deegaanka ay ka soo jeedaan maleeshiyadii weerarkaasi gaysatay.
Ciidamada ayaa waxaa marba marka xigga soo gaaraya warar hubinti la’aan ah, kuwaa oo aad arkeyso inay marba goob ku jiheynayaan hawlgalka ay ka wadaan gobolkaasi.
Wasiirka Amniga Galmudug, Axmed Macalin Fiqi ayaa hoggaaminaya guddi uu Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) u wakiishay in baaritaan ku soo sameeyan dhacdadaasi.
Axmed Shire Falagle, Wasiirka Warfaafinta Galmudug ayaa sheegay in wax ku cusub deegaanka uu yahay in la beegsado Ciidamadii Qaranka.
“Waa xaajo ugub ah, aad ugub ugu ah deegaanka. Deegaanka ciidamo dowladdu leedahay oo dharka ciidamada loo yaqaano wata, marna jidadka looma galo, marka laga reebo Shabaab iyo wax kaloo sidaas ah. Dadka deegaanku maleeshiyaadyo waa jir jiraan oo habab beeleed isku haysta, laakiin ciidanka kan, Ciidanka Dowladdu ahaa, in la laayay oo jidka loo galay uun baa hadda la ogyahay, waana xaajo ugub nagu ah.” Ayuu yiri Falagle.
Si kastaba ha-ahaatee Taliyihii hore ee Ciidanka Xoogga Dalka, General Cabdulqaadir Sheekh Cali Diini ayaa Maamulka Galmudug iyo Odayaasha Dhaqanka ugu baaqay in ay u istaaggaan xalinta dhibaatadaan soo korortay.
“Ciidanka Xoogga Dalku waa astaan u taagan qaranimada, beegsigooduna wuxuu abuuraya arrin aan wanaagsanayn. Waxaan ugu baaqayaa Maamulka Galmudug iyo odayaasha deegaanku in dhibaatadaan xalinteeda u istaaggaan. Ilaahay ayaan jannadiisa u weydiinaynaa Saraakiishii ku dhimatay falkaasi.” Ayuu yiri General Diini oo warkan ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay hawlgalka lagu baadigoobayo maleeshiyadii Saraakiisha leysay
Next articleCuleysyo hor leh oo ku soo kordhay Doorashooyinka Somaliya